Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada Galmudug & Qoorqoor oo dagaal ku baaqay – Radio Daljir
Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada Galmudug & Qoorqoor oo dagaal ku baaqay
Oktoobar 8, 2021 8:48 b 0
Waxaa weli cirka isku shareeraya xiisada colaadeed ee ka dhalatay khilaafka soo kala dhex galay Dowlad goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna oo la wareegay deegaano ka tirsan Galmudug.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Galmudug oo wado diyaargarow uu ku doonayo inuu dib ugula wareego deegaanada ay la wareegeen ururka Ahlu Sunna Jimcihii aynu ka soo gudubnay oo ay ku jirto magaalada Guriceel.
Kulan degdeg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada Galmudug ayaa laga soo saaray qodobo ay ku jiraan arrimaha amniga.
Kulankaan deg-dega ahaa oo uu Madaxweynaha Galmudug la yeeshay Golihiisa Wasiirada ayaa ku oo aadaya xilli Wasiirkii Amniga Maamulkaas Axmed Macalin Fiqi uu xilkii iska casilay.
Qodobada kulanka golaha wasiirada Galmudug oo uu shir guddoomiyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen;
1. Goluhu wuxuu go’aamiyay in la dardargeliyo Suggida Amniga iyo xasiloonida Galmudug,
2. Goluhu wuxuu ugu baaqay kooxaha ku howlan falalka amni daro inay ka waantoobaan, damacoodana ay ku doonaan si nabad ah.
3. Goluhu wuxuu soo saaray in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo loo gudbiyay dhinacyada ay khuseyso si ay gutaan waajibaadkooda kaga aadan.
Dhinaca kale waxaa gadood ka sameeyeey qaar kamid ah ciidamada daraawiishta Galmudug magaalada Gaalkacyo iyagoo la wareegay barta koontarool lacagaha canshuuraha laga qaado ee ku taal Koofurta Gaalkacyo.
Koontoroolka ay Ciidamada gadoodsan la wareegeen ayaa waxaa ku sugnaa Ciidamo ka tirsan Booliska Galmudug, balse ay isaga baxeen iyagoo aan dagaalamin.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo ka hadlay gadoodkan ayaa sheegay in Ciidamada ay ka gadoodeen mushaar la’aan ay ka cabanayaan kadib markii Ciidamada kale ee Galmudug uu mushaarka u soo dhacay.
Falagle ayaa beeniyay in gadoodka Ciidamada uu salka ku haayo is casilaadii Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, waxaana uu sheegay in la xalin doono waxyaabaha ay ka cabanayaan Ciidamadaas.
Ingiriiska oo Soomaaliya ka saaraya dalalka ku jira liiska cas